Cheap ny ondana, Sina, orinasa, mpanamboatra ary mpamatsy - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Home > Products > Ilay ondana
Silika ondana dia natao araka ny fitsipiky ny Ergonomics
Ity vokatra ity dia azo sasana, voasasa amin'ny masinina, famonoana otrikaina be, avelao tsy hanana ahiahy ny fahasalamanao.
Ity vokatra ity dia anti-bakteria, porofo malemy, porofo amin'ny hamandoana, tsy fanovana endrika, fanoherana ny fahanterana.
Ny silika ondana dia vita amin'ny gel silika voajanahary madio. Ny fitaovana dia voajanahary ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Mandritra izany fotoana izany, ny ondana dia tsy fandotoana sy tsy misy poizina, misy fanoherana ny alègique, anti-mite ary anti-bakteria ary tsy manahy momba ny olana ara-pahasalamana mandritra ny fampiasana azy.
Ny ondana silika dia natao araka ny fitsipiky ny ergonomika. Ny ondana dia afaka mifanaraka amin'ny fihodinan'ny lohan'olombelona sy ny hatoka mandritra ny fampiasana azy, manatsara ny tsindry amin'ny hazondamosin'ny vozon-tranonjaza sy ny hazondamosina, ary mahatonga ny olona hahatsapa tena mahazo aina.
Marika: FUYA Parameteran'ny vokatra: â € ¢ Marika: FUYA â € ¢ Item No. .: Dromen 871 8017 â € ¢ Taona azo ampiharina: 3-12 taona â € ¢ Fiandohana: China China â € ¢ Faritany: Faritanin'i Guangdong â € ¢ Tanàna: Tanànan'i Dongguan
Ny ondana silika dia azo diovina amin'ny rano avo lenta ho an'ny ankizy
Green pillily silika fahasalamana mpiambina mamy voajanahary
Vovoka malefaka Maitso ekolojika I Manga ny lanitra
Misy karazana ondana telo matetika amin'ny ankapobeny:
Akora granular: voa na akorandriaka. Satria afaka misosa malalaka, ity karazana ondana ity, dia tsy hanome tsindry ny vozon'ny zaza, ary azo atao tsara ny mametraka ny toeran'ny lohany eo an-tampon-jaza, misoroka ny kenda. Ny fitaovana voajanahary miaraka amin'ny fitrohana ny hamandoana tsara sy ny fibobahana ao anaty rivotra dia manana andraikitra hampiroborobo ny faharanitan-tsaina sy ny ati-doha, ny fanorana ny lohan'ilay zaza ary ny fampiroboroboana ny ati-dohan'ilay zaza.
Ondana gel silika
Ny silika gel ondana dia vita amin'ny silica gel. Ny vokatra farany havaozina, vita amin'ny akora miverina miadana, dia rakotra gel izay mampangatsiaka ny vatana rehefa matory izy ary ampiasaina matetika hamoronana endrika amin'ny loha sy hatoka.
Ny orinasa Ilay ondana dia manana kalitao avo, tsara laza ary serivisy mieritreritra ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany. Miaraka amin'ny vidiny mora dia hahazo Ilay ondana serivisy sy serivisy tena tsara ianao. Miaraka amin'ny "kalitao tena tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002 ~